Mareykanka oo digniin u diray Turkiga
Dowladda Mareykanka ayaa maanta ka digtay in weerar kasta oo Turkiga ay ku qaadaan maleeshiyada Kurdish-ka ah ee Syria, uu noqon doono “mid aan la aqbali karin.”
“Waxaan aaminsannahay in weerar hal dhinac oo Turkiga ay qaadaan uu yahay mid aan la ogolaan karin” waxaa sidaas yiri xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper oo weriyayaasha kula hadlay magaalada Tokyo oo uu safar ku joogo.
“Waxa aan hadda ka shaqeeneyno ayaa ah inaan ayaga [Turkiga] kala shaqeyno qorshe wax looga qaban karo walaacooda, waxaana ku rajo weynahay inaan gaari doonno halkaas….waxana isku dayeynaa inaan ka hortagno inay qaadaan tallaabo hal dhinac ah” ayuu yiri Esper.
Hadallada Esper ayaa yimid laba maalmood kadib markii madaxweynahaTurkiga Reccep Tayyip Erdogan uu wacad ku maray inuu waqooyiga Syria, gaar ahaan bariga Webiga Furat, ka fulin doono howlgal ka dhan ah kooxda Kurdish ee YPG, ee Mareykanka uu taageero.
Waxaa hadda socda wada-hadallo u dhaxeeya saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo dhiggooda Kurdish-ka, kuwaas oo looga dan leeyahay in la abuuro “aag amni” oo laga hirgeliyo Waqooyiga Syria, si kooxda YPG looga fogeeyo xuduudda Turkiga.